Isibophelelo esichasene neMicimbi kaRhulumente u-Jordie Zwarts utshona kwiitoni, kodwa akaphumeleli nantoni na: UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	14 Meyi 2020	• 5 Comments
Unokutsalwa ngamandla kwi-whirlpool yezezimali, njengoko kukhuthazwe nguRobert Jensen kwelakhe ku gqibela, kodwa kwenzeka ntoni ngemali yakho? Nam ke ndacelwa ukuba ndixhaswe ngumsunguli weBond ngokuchasene neMicimbi kaRhulumente, uJordy Zwarts (jonga ifoto), kodwa ngesenzo esifanayo ne-5G akafikanga nto. Nangona kunjalo, wanyusa amashumi amawaka euros (imithombo emininzi) kunye enokulindeleka kumatyala omthetho ngokuchasene nokuvalwa kunye nemitha enye enesiqingatha yamanyathelo ukusuka kurhulumente.
"Kutheni le nto iVortex yezezimali kwaye sele usitsho ukuba ayizukuba nto Vrijland? Ngoku Joyina imikhosi! Ikhekhe iWeltschmertz iyamxhasa, uJensen uyamxhasa!Ngenxa yokuba abagwebi namagqwetha bafunga bethembekile kwitrone (indlu yobukumkani) kwaye ngekhe bayijongele phantsi into abayifungayo ngokunyaniseka kwabo.
"Ewe, kodwa amanyathelo e-coronavirus awangqinelani nomgaqo! Banokufezekisa okuthile!"Into kuphela uJordy Zwarts ayakuyifumana kukuba i-akhawunti yakhe yebhanki iyenyuka kwaye nguRobert Jensen ("jensaba33") Izibonelelo ngokumkhuthaza. Okwangoku, ulinda kwaye ungenzi nto.
Ewe unokuyazi loo nto ngokwakho, kodwa ke ndilumkisile. Ndicinga ukuba kufuneka siphaphame ukuba kwenzeke ntoni.
NgoRobert Jensen noJordy Zwarts (Imicimbi yaseburhulumenteni), uyaqhubeka nokubeka abanye inyathelo. Ufaka i- € 29 kwaye ke unethemba lokuba igqwetha liya kufaka ityala, elinokuthi okanye lingaphumeleli. Ngaba ngokwenene ufuna ukuba ube nelize kwaye ukholelwe ukuba ijaji iya kugweba urhulumente? Hayi akunjalo. Bonke bafunga ngokunyaniseka kwisithsaba.
Asinaxesha lokuchitha. Yimizuzu eyi-1 ngaphambi kwe-12. Urhulumente wale mihla ubonakalisile ukuba angalujika uluntu lonke kwiiveki nje ezimbalwa. Izinto ebezinokuthathwa njengezingekho ngqiqweni kwaye zingenakufikelelwa zithethwe ixesha elifutshane kakhulu. Uqoqosho luphela kunye nendlela yonke yokuhlala kunye itshintshelwe phezulu. Oko kuthetha ukuba utshintsho olukhawulezileyo ngokucacileyo lunokwenzeka. Ke utshintsho lungahamba ngokukhawuleza.
Ayizokulindela utshintsho kurhulumente okanye ulindele utshintsho kwi-Bond echasene neMicimbi kaRhulumente. Kufuneka sizenze ngokwethu! Akufanele sijike ukudandatheka kwethu silinde umanyano, kufuneka sijike ukudana kwethu sibe namandla kunye nezenzo zekhonkrithi. Ukwenza usebenze ngokwakho funda qhubeka apha ...
URobert Jensen (jensen.nl) kunye 'nokumisa ucango', othe, ngokukaMartin Vrijland, ngumnatha wokhuseleko
tags: Qinisa, amagqwetha, advocaat, enye enesiqingatha, bond, coffee, de, eziziimbalasane, siseko, Jensen, jensen.nl, jordy, Amazing, imitha, imicimbi karhulumente, inqubo, rhu lumente, yeka, chasene, I-Weltschmertz, emanzi, mnyama
14 Meyi 2020 kwi-22: 54
Kubafundi abatsha: I-Freemason ihlala ikwazisa ukuba bangabaklabhu. Inani lama-33 liyinombolo ebalulekileyo ye-Masonic.
Usasazo lwaseJensen luhlala imizuzu engama-33 kwaye uJensen uzibiza ngokuba yiJensba33.
Fumana umfanekiso? Ilawulwa inkcaso.
14 Meyi 2020 kwi-22: 55
UBaba ngumntu omkhulu onamandla waseAfrika ophuma kwelinye lamazwe ajikeleze iGulf of Guinea. Wabanjwa ngumrhwebi wamakhoboka wathengiswa kwihlabathi elitsha. Ixesha elininzi wakhokela ubomi bekhoboka kwisityalo saseMelika, waze wakhululwa yiRedbeard yasePirate. Ukusukela ngoko ebengomnye wabaseki bezokonqena otyunyuziweyo, kunye no-Tripod kunye nonyana othathelwe nguRedbeard uErik. Udadewabo uAïcha wayelikhoboka eAlgiers, owabulawa emva kokunceda uErik ukubaleka esixekweni.
Mkhulu, womelele kwaye ubhukuda njenge dolphin. Akakwazi ukubiza u "r", oko akuthethi ukuba akalumkanga, kuba uhlala eneengcinga ezilungileyo kunye nengqondo eqinileyo yokusebenza. Kungenxa yoko iRoodbaard kunye no-Erik bashiya rhoqo umbutho wokuhlaselwa komhlaba ukuya ku-Baba.
15 Meyi 2020 kwi-07: 00
Ewe, okuninzi b (l) ab (l) a…
14 Meyi 2020 kwi-23: 51
Isizathu sokuba uJensen ngoku egxile (kwaye uya kuphinda abuye ngomso) kwi-Bond ngokuchasene neMicimbi kaRhulumente kukuba awukwazi ukuthatha inxaxheba kumanyathelo asimahla aseburhulumente. Kuya kufuneka uhlale kumnatha wokhuseleko olawulawulwayo kwaye, ngaphezu kwako konke, ungashukumi kwaye uqalise ngokwakho.
Ixesha lokwenza njalo: https://www.fvvd.nl/
26 Meyi 2020 kwi-09: 49
« Ngaba kufuneka uthathe okanye uyaliwe iyeza le-Covid-19 ukuba ngaba kunyanzelekile? Kwenziwe ntoni?
Nqamleza idemokhrasi indlela emfutshane esuka ekuvaleni nasekuvuseleleni uqoqosho »
Utyelelo lulonke: 2.521.366